Entertainment Archives - Baganthar
G Fatt gives his friendarequest to marryagirlfriend
Bagan Thar Dec 01
G Fatt isahit among young fans, withahuge following. G Fatt, who writes and composes beautiful lyrics and lyrics, comes fromamale audience. It is not wrong forasinger who ...
“Waiting You For A Long Time But I Didn’t Expect It”
Bagan Thar Nov 27
Once, inacountry, there wasababy princess. One day, he came down to the river to takeabath and sawafisherman catchabig fish. “Sorry for the big fish”, So ...
“About My New Polite Daughter-In-Law”
Bagan Thar Nov 25
“About My New Polite Daughter-In-Law” To Mom, As I said, I have been looking foranew daughter-in-law for my mother so that she can be married again so that her husband can complete the ...
Bagan Thar Nov 13
You may have spentalot of money while traveling during your vacation. This is for leisure travel, but you can get it now. But if you are going foravacation, you may need ...
How hard is the journal article?
Bagan Thar Nov 03
Thinking about why the animals are so happy in the world and not able to reach their goals, it is obvious that they cannot break their bond. The difficulty is not to try to cut ...
“Drop The Plow and Release The Lead”
Bagan Thar Oct 17
“Drop The Plow and Release The Lead” More than two thousand years ago,aman inamarket in Athens, Greece, was staring at the display of goods hanging from the store by each person. ...
Will Higher IQ Lead To Success?
Bagan Thar Oct 09
Angela Lee Duckworth left her job to teach young children afteralot of pressure. The work of educating seventh-grade children is less stressful than previous consultations. Asaresult, I becameamath teacher ...
လက်စောင်းထက်ရဲ့ သမီးတော်ရာဇဝင် (၈) – တစ်ရက်ထဲမှာ သိန်းတစ်သောင်းကျော်ဖိုး ဈေးဝယ်
Bagan Thar Oct 07
လက်စောင်းထက်ရဲ့ သမီးတော်ရာဇဝင် (၈) – တစ်ရက်ထဲမှာ သိန်းတစ်သောင်းကျော်ဖိုး ဈေးဝယ်တဲ့ သမီးတော်တွေ မန္တလေးနန်းမြို့တည် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးကို စိတ်အဆိုးဆုံးလူတွေပြပါဆိုရင် မန္တလေးနန်းမြို့ထဲက အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာချုပ်တိုင်းမှူးနဲ့ အရာရှိတွေကို ပြရပါလိမ့်မယ်၊ မန္တလေးမြို့ကို မြို့တည်ခဲ့တဲ့အတွက် သမီးတော်တွေ ပြင်ဦးလွင်တက်တိုင်း မန္တလေးဟာ ခရီးတစ်ခေါက်နားရာ ဈေးဝယ်ရာမြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီတပတ်လည်း သမီးတော်တွေ ဆုံညီကြွမြန်းလို့ လာပြန်ပါပြီ။ နှစ်အနေနဲ့ ပြောရရင် ၂၀၀၇ ခုနစ်ပေါ့၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးကလည်း အသစ်စက်စက်တိုင်မှူးလေးဆိုတော့ တိုင်းမှူးရဲ့ဂါရဝတရားဆိုတဲ့ အရိုအသေပေးမဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ ...
လက်စောင်းထက်ရဲ့ သမီးတော်ရာဇဝင် (၇) – ရော့ခ်သီချင်းနဲ့ ပုတီးစိပ်တဲ့ သမီးတော်
Bagan Thar Oct 05
လက်စောင်းထက်ရဲ့ သမီးတော်ရာဇဝင် (၇) – ရော့ခ်သီချင်းနဲ့ ပုတီးစိပ်တဲ့ သမီးတော် သမီးတော်တွေဟာ သွားလေရာမှာ ပြောစမှတ်တွင်အောင်ကို စွမ်းဆောင်နိုင်ကြ၊ တော်ကြပါပေတယ်။ ခက်တာက အာဏာရှင်ကြီးရော သူ့ဇနီးကရော ဒီသမီးတော်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့၊ ဟိုလိုတော့ မလုပ်နဲ့ဆိုပြီး ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း လုံးဝမရှိတာပဲ။ သားသမီးတွေအပေါ် အလွန်တစ်ရာမှ သည်းခံ အလိုလိုက်တဲ့ မိဘတွေဖြစ်တယ်။ မိဘတွေ အလိုလိုက်လေလေ သမီးတော်တွေက ဆိုးလေလေ ဖြစ်တယ်။ သမီးတော်တွေကလည်း တစ်ပါးနဲ့ တစ်ပါးက ...
လက်စောင်းထက်ရဲ့ သမီးတော်ရာဇဝင် (၆) – ပုပ်ရင်ပေါ် ဟုတ်ရင်ကျော်
လက်စောင်းထက်ရဲ့ သမီးတော်ရာဇဝင် (၆) – ပုပ်ရင်ပေါ် ဟုတ်ရင်ကျော် သမီးတော်တွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ အတွင်းဝန်ရာထူးတွေ ခန့်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ ဇာတ်သိမ်းမလှပဲ ထောင်ထဲမှာပဲ ဘ၀ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကို ကုန်လွန်ခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့် သူထောင်ကျခဲ့ရသလဲ ဆိုတာ လူတွေ အတော်များများ မသိကြပါဘူး။ ဒီကိစ္စကလည်း သမီးတော်တွေရဲ့ စနက် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်နဲ့ စင်ကာပူကို အစည်းအဝေး သွားနေချိန်မှာ သမီးတော်တွေရဲ့ မယ်မယ်ဘုရား ...